2 देखि4दिनमा परीक्षाको लागि कसरी अध्ययन गर्ने
2 देखि4दिनमा परीक्षाको लागि अध्ययन गर्नुहोस्
आगामी परीक्षाको लागि व्यवस्थित कसरी गर्ने
एक परीक्षाको लागि अध्ययन केकको एक टुक्रा हो, भले ही तपाईं तयार गर्न केही दिनहरू छन्। यो धेरै समय हो, धेरै व्यक्तिहरूले परीक्षाको लागि अध्ययन गर्ने सोचमा परीक्षा सुरु गर्नु अघि मिनेटमा cramming समावेश गर्दछ विचार गर्दछ। तपाईंले पढ्नु भएको दिनहरूको संख्या बढेर, तपाइँ प्रति सत्रमा राख्नु भएको वास्तविक अध्ययन समय घटाउनुहोस्, यदि तपाईंले परीक्षाको लागि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा एकदम सही छ।
कुनै चिन्ता छैन। यो पूर्णतया दिनको एक मुट्ठीमा परीक्षाको लागि अध्ययन गर्न सम्भव छ। तपाईलाई चाहिन्छ योजना चाहिन्छ, र यहाँ कसरी निर्माण गर्ने हो।
चरण एक: सोध्नुहोस्, व्यवस्थित गर्नुहोस्, र समीक्षा गर्नुहोस्
आफ्नो शिक्षकलाई कस्तो प्रकारको परीक्षा सोध्नुहोस्। बहु विकल्प? निबन्ध? परीक्षाको प्रकारले तपाइँ कसरी तयार पार्छ भनेर ठूलो फरक पार्दछ किनकि तपाईंको ज्ञानको ज्ञान एक निबंध परीक्षाको साथ अधिक हुन आवश्यक छ।
आफ्नो शिक्षकलाई एक समीक्षा पानाको लागि सोध्नुहोस् वा परीक्षण गाइड यदि उसले वा तपाईंले पहिल्यै तपाइँलाई दिएको छैन। समीक्षा पानाले तपाईंलाई सबै प्रमुख कुराहरू बताउनेछ जुन तपाईंले परीक्षण गरिने छ। यदि तपाइँसँग यो छैन भने, तपाईंले परीक्षाको बारेमा थाहा पाउन आवश्यक चीजहरूको लागि पढ्न सक्नुहुन्छ।
भोलि रातीको लागि सेटअप एक अध्ययन साझेदार पाउनुहोस् - फोन वा Facetime वा Skype मार्फत पनि। यसले तपाईलाई इमानदार राख्न सक्छ जुन तपाइँको टोलीमा कसैलाई मदत गर्न मद्दत गर्दछ।
आफ्नो नोट, पुरानो प्रश्नोत्तरी, पाठपुस्तिका, असाइनमेन्ट, र ह्यान्डआउटहरू इकाईको परीक्षणबाट लिनुहोस्।
तपाईंको टिप्पणीहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्। रिफ्राइट वा तिनीहरूलाई टाइप गर्नुहोस् ताकि तपाइँले तपाईले लेख्नु भएको वास्तवमा पढ्न सक्नुहुन्छ। मिति अनुसार तपाईंको ह्यान्डआउट व्यवस्थित गर्नुहोस्। तपाईंले हराएको कुनै पनि चीजको टिप्पणी गर्नुहोस्। (अध्याय2बाट भित्री प्रश्नोत्तरी कहाँ छ?)
तपाईंको सामग्रीको समीक्षा गर्नुहोस्। तपाईंले जान्नु भएको कुरा पत्ता लगाउन समीक्षा पाना मा जानुहोस्। आफ्नो क्विजहरू, ह्यान्डआउटहरू, र टिप्पणीहरू मार्फत पढ्नुहोस्, तपाईंले परीक्षण गर्नुहुने सबैलाई हाइलाइट गर्दै। आफ्नो किताबको अध्यायहरूमा जानुहोस्, तपाइँलाई भ्रमित गरीएको खण्डहरू, अस्पष्ट, वा ज्ञात भागहरू। आफैलाई सोध्नुहोस् प्रत्येक परीक्षाको पछाडिको परीक्षा परीक्षामा समाविष्ट गर्नुहोस्।
यदि तपाइँसँग पहिले नै छैन भने, कार्ड , शब्द, वा शब्दावली शब्दको साथ कार्डको अगाडिमा Flashcards बनाउनुहोस् , र पछाडिको जवाफ।
ध्यान राख्नुहोस् !
चरण 2: याद गर्नुहोस् र प्रश्नोत्तरी
तपाईंले आफ्नो शिक्षकसँग पूर्णतया बुझ्न सक्ने कुरा स्पष्ट गर्नुहोस्। छुटेको वस्तुहरूको लागि सोध्नुहोस् (अध्याय2बाट किनेबहुन्छ।)।
शिक्षकहरू प्रायः एक दिन अघिको समीक्षाको समीक्षा गर्छन्, त्यसैले यदि उसले समीक्षा गरिरहेको छ भने, ध्यान दिनुहोस् र तपाईंले केहि अघि अघि पढ्नु भएको केहि लेख्नुहोस्। यदि शिक्षक आज यो उल्लेख गर्दछ भने, यो परीक्षामा छ, ग्यारेन्टी!
दिनभरि, तपाईंको फ्ल्याककार्ड बाहिर निकाल्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस् (जब तपाईं क्लास सुरु गर्न पर्खिरहेका बेला, लंचमा, अध्ययन हलको बेला आदि)।
यस साँझको लागि मित्रको साथ अध्ययन मिति निश्चित गर्नुहोस्।
45 मिनेटको लागि एक टाइमर सेट गर्नुहोस्, र समीक्षा पानामा सबै चीजहरू याद गर्नुहोस् जुन तपाईंले पहिले नै नोनोमिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर जस्तै एन्कोनक्समेन्ट वा गीत गाएर जान्नुहुन्न। टाइमर बन्द भएपछि एक पाँच मिनेटको ब्रेक लिनुहोस्, र फेरि 45 मिनेटको लागि फेरि सुरू गर्नुहोस्। तपाईंको अध्ययन साझेदार आइपुग्दा सम्म दोहोर्याउनुहोस्।
प्रश्नोत्तरी। जब तपाईंको अध्ययन साझेदार आइपुगेको छ (वा तपाईंको आमाले तपाईंलाई अन्वेषण गर्न स्वीकार गर्दछ), एक अर्कालाई सम्भावित परीक्षाका प्रश्नहरू सोध्न उत्प्रेरित गर्दछ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँमध्ये प्रत्येक को एक बारी सोध्नु र जवाफ छ किनकि तपाईं दुवै गरेर गरेर सामग्री सिक्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग एक दिन वा दुई भन्दा बढी छ भने, तपाईं खिच्न सक्नुहुन्छ र चरण2को रूपमा धेरै पटक दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। भाग्यले साथ दिओस्!
पढ्ने व्यापक कार्यपत्र2उत्तर
प्रथा अभ्यास प्रश्नहरू
पढ्ने व्यापक कार्यपत्र 2
5 हाई स्कूल गणित अध्ययन गर्न वेबसाइट
दोस्रो ग्लोबल रिडिङ समस्त किताबहरू
मुख्य आइडिया कार्यपत्र2खोज्दै
लैटिन रूट "एम्बुल" बुझ्ने
लेखकको टोन के हो?
मुख्य आइडिया जवाफ2खोज्दै
एक महिनामा परीक्षणको तयारी गर्दै
राम्रो खोजी गर्नका लागि 15 कदम
उच्च क्षमता बसहरू - अभिव्यक्ति वा डबल डेकर?
सोनी वाकिमको इतिहास
12 खुवाउने तरिका, स्वस्थ विवाह
किन बुश र लिंकन दुवै निलम्बित हबीस कार्पस
सबै भन्दा धन्य बहादुरीको सेन्ट मारिया फैस्टिना कोलोस्का
अमेरिकी नागरिक युद्ध: मेजर जनरल जेब स्टुआर्ट
चित्रकारी बनाउनका लागि प्रविधि
फ्लोरिडा कलेजहरूमा प्रवेशको लागि एक्टिट स्कोर तुलना
यूएस मिडटरम चुनाव र तिनीहरूको महत्त्व
युग, एक अवधि र आन्दोलनको बीच के फरक छ?
बकुन्न विश्वविद्यालय प्रवेश
रोइरङ पुस्तकहरु: 1920 को लखनऊ पढ्नु पर्छ
एलेन ओचोआ: आविष्कारक, खगोलविद्युत, पायनियर
ठूलो लोक संगीत डुओस
विकलांगहरू विद्यार्थीहरूलाई समर्थन गर्न खेलहरू
जॉन एडम्स वर्कशीट र रंग पृष्ठहरू
Astro-Hoaxes मा हँसिलो (तर गंभीर रूपमा लिनुहोस्)
वास्तविक समुद्री डाकू उद्धरण
"बाह्र गुलाबी पुरुष": रेग्रेलेन्ड गुलाबको नाटकबाट क्यारेक्टरहरू
पायथनसँग रेखा द्वारा फाईल रेखा कसरी विश्लेषण गर्ने
जेफसनको पत्र ड्यानबरी ब्याप्टिस्टमा छ
4 कक्षाको लागि फास्ट डेबेट्स ढाँचा
ची-स्क्वायर तालिकाको साथ महत्वपूर्ण मान कसरी पत्ता लगाउनुहोस्
खेलकुद कार्ड एकत्र गर्ने एक शुरुवात गाइड